Ugu fiican 8-O-methylurolithin A budada (35233-17-1)-Soo-saaraha & warshadda
Cofttek waa kan ugu fiican 8-O-Methylurolithin A soo-saaraha budada ee Shiinaha. Warshadeena waxay leedahay nidaam maareyn wax soo saar oo dhameystiran (ISO9001 & ISO14001), oo leh awood wax soo saar bille ah 100kg.
8-O-methylurolithin A Tilmaamaha
Name: 8-O-methylurolitin A
Magaca kiimikada: Methylurolitin A
Caanaha Kiimikada: C14H10O4
Miisaankani waa: 242.227g
Color: Budada Jaale khafiifa
Keydka InChi: /
NOLOSHADA SMILES: /
function: 8-O-methylurolithin A wuxuu leeyahay anti-bararka, anti-oxidant, anti-kansarka, hypoglycemic iyo hawlo kale oo bayooloji ah.
Codsiga: 8-O-methylurolithin A ayaa la xaqiijiyay inuu dib u bilaabayo autophagy mitochondrial wuxuuna dib u rogaa gabowga muruqa.
Xalka: Ku milmi kara DMSO (3 mg/mL)
Kaydinta Nabadgelyada: Qalalan, madow iyo 0 - 4 C muddo gaaban (maalmo illaa toddobaadyo) ama -20 C muddo dheer (bilo illaa sannado).